पत्रपत्रिकाबाट | News Polar
भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा कालोबजारी सुरु
काठमाडौँ । भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको छ । व्यवसायी संगठित भएरै कृत्रिम अभाव गराइरहेका छन् । भारतले भदौ २९ देखि निर्यात रोकेको थियो । त्यसलगत्तै यहाँ कालोबजारी सुरु भएको हो । काठमाडौंको बल्खुमा बुधबार प्याजको मूल्य अनुगमनमा निस्किएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति…
राप्रपा निर्वाचन चिह्नको विवादः चिह्न ‘हलो’, झन्डा ‘गाई’
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र पार्टी एकता हुँदादेखि नै नसुल्झिएको निर्वाचन चिह्नको विवाद एकताको ६ महिनापछि टुंगिएको छ । गत २८ फागुनमा पार्टी एकता हुँदा थाती राखिएको चिह्न विवाद पटक पटकको अध्यक्षत्रयबीचको छलफलपछि बुधबार टुंगिएको हो । राप्रपा अध्यक्षत्रय कमल थापा, पशुपतिशमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीबीचको प…
आज विश्वकर्मा दिवसः देशभरी विश्वकर्मा बाबाको पूजाआराधना गरी मनाइँदै
काठमाडौँ । कन्या अर्थात् आश्विन सङ्क्रान्तिका दिन आज कालीगढले विश्वकर्माको पूजाआजा गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदैछन् । विभिन्न कलकारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्वीरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ । कलकारखानालाई विशेष रुपमा सजाएर मजदूरलाई समेत सहभागी गराएर यो दिवस मनाइन्छ । यस …
बालुवाटारको डिजाइन- खतिवडाभित्र कुलमान बाहिर !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार हुँदाहुँदै पनि मन्त्रिपरिषद्ले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले खतिवडालाई मन्त्रीसरहको सेवासुविधासहित प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो । प्रधानमन्त्री …
बहत्तर सालपछि ५० हजार परकम्प, विज्ञहरु भन्छन्- परकम्प अझै आउँछन्
काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको राम्चे केन्द्रबिन्दु भएर बुधबार सबेरै ६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो । ठूलै झड्काले सबै आत्तिए । ज्यान जोगाउन भागदौड गर्दै कतिपय सडकमा पनि पुगे । धन्न, मानवीय क्षति भएन । पुनस्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रानीपोखरी बीचको मन्दिर बनाउनका लागि बुधबार इँटा बोक्दै महिला । ०७२ को भूकम्पपछि गरिनुपर्ने अ…
नेकपा सचिवालय बैठक भोलि बस्ने, एमसीसी तथा अन्य निर्णयहरूको थप कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुने
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने भएको छ । बैठक शुुक्रबारका लागि तय गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा बुधबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच छलफलपछि बैठक तय भएको हो । भदौ २६ गते…
६ महिनादेखि थन्किएका लामो रुटका बस आजबाट सञ्चालन हुने
काठमाडौं । आज बिहीबार असोज १ गतेदेखि मध्यम र लामो रुटका बस सञ्चालनका लागि तयारी भइसकेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीले झन्डै ६ महिनादेखि थन्किएका सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन थालेका हुन् । तयारीस्वरुप यातायात व्यवसायी र चालक महासंघ सम्मिलित संयुक्त कार्यदलले आज बिहीबारबाट बस सञ्चालनका लागि सबैलाई अनुरोध …
शवदाह संस्कार गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर
काठमाडौं । आफ्नो परम्परा, रीतिरिवाजअनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शवदाह संस्कार गर्न दिने गरी आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । अधिवक्ताहरु रामेश्वरप्रसाद कोइराला, मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कानुनमा आफ्नो रीतिरिवाज तथा कुल धर्मअनुसार शवको दाह संस्…
काठमाडौं । बहराइनका राजकुमारसहितको टोली नेपालको हिमाल चढ्नका लागि आउन लागेको छ। राजपरिवारका एक सदस्यसहित १८ जनाको टोली लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहणको उदेश्यसहित गएराति करिब १२स्३० बजे नेपाल प्रस्थान गरेको बहराइनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ। भदौ १५ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीक…
भारतबाट प्याज निर्यातमा रोक, नेपाली बजारमा प्याजको मुल्य बढ्यो
काठमाडौँ । भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा एकै दिन होलसेलमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । सोमबार प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको भारतीय प्याज मंगलबार ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ । खुद्रा बजारमा एक किलोकै १ सय रुपैया…